भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक रह्यो : डा. महत (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक रह्यो : डा. महत (भिडिओसहित)
काठमाडौं, २७ असोज । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफूहरुको भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको सुनाएका छन् । नेपालप्रति भारतीय जनता पार्टीको सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको पनि उनले सुनाएका छन् ।
हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफ्नो पार्टी पनि नेपाल र भारत दुई देशबीच सुमधुर सम्बन्ध बनाउन चाहेको सुनाए । उनले भारत भ्रमणको क्रममा आफूले तुईन प्रकरणको विषय पनि उठाएको स्मरण गराए ।